admin admin – Page3– Myanmar News
Bagan is the place which is wealth for world herniate of Myanmar. Bagan is the first King Emperor city of Myanmar. It is the development place for Buddhism Religious. It …
မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဟြလုံေက်း႐ြာ၌ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲ သူ က စိတ္ေဖာက္ျပန္ၿပီး (၅)ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္ မႈျဖစ္ပြား
January 31, 2020 March 19, 2020 - by admin admin - LeaveaComment
မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲၿပီး စိတ္ေဖာက္ျပန္ေန သည္ဆိုသူက ဇနီးႏွင့္ သားသမီး ၄ ဦးကို ဓါးျဖင့္ခုတ္ ကာ မိမိကိုယ္ကို ဓါးျဖင့္ထိုးခုတ္၍ ေသဆုံးခဲ့သည္ ဆိုမႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ တြင္ သိရ သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ၁၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ …
တရားသူကြီးရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် အချုပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ သမီးလေး
January 30, 2020 March 19, 2020 - by admin admin - LeaveaComment
တိုင်းပြည်ကလည်း မကြင်နာ တတ်တဲ့ တိုင်း ပြည်များ ဖြစ်နေလားမသိဘူး။ ကိုယ့်သမီးလေး အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ပြီး စကားပြန်အလုပ်လေး လုပ်နေတာ ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးသေးဘူး စက်မှုလျှော်ပင် Hemp စိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ပါလို့ ဆိုပြီး အချုပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာ မအေ၊ မိဘ ဘယ်လောက်တောင် အလူးအလဲ ဖြစ် နေမလဲ။ ပြည်ထဲရေးကလည်း မူးယစ်ထဲကနေ Hemp …
တရုတ်မှပြန်လာ သည့် မြန်မာလုပ်သား များကို ကန်ပိုက်တီ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ကျန်းမာရေးစစ် ဆေး
တရုတ်နိုင်ငံ ထိန်ချုံးမြို့မှ ပြန်လာသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၃၀၀ ကို ကန်ပိုက်တီ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန် သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ထိန်ချုံးမြို့မှ မြန်မာ အလုပ်သမား ၃၀၀ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး တစ်ရပ်ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည်လက်ခံ ရေးနှင့် …
သီရိလင်္ကာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည့် မြန်မာ့စွယ်စုံဆင် Myan Kumara နှိပ်စက်ညှဉ်း ပန်းခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ် စေ ရန် မြန်မာသံရုံးက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ မေတ္တာရပ်ခံ
သီရိလင်္ကာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည့် မြန်မာ့စွယ်စုံဆင် Myan Kumara နှိပ်စက်ညှဉ်း ပန်း ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်နောင်ထပ်မံ မဖြစ်ပေါ်စေရန် မြန်မာသံရုံးက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့အနီးရှိ Bellanwila Temple သို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က လှူဒါန်း ခဲ့သည့် Myan …